[30 / 05 / 2020] Sancaktepe Prof. Dr. E mepee ụlọ ọgwụ mberede Feriha Öz	34 Istanbul
Day: Mee 23, 2020
Ndị ọchụnta ego Turkish na-azụta ahịa ha na ahịa ụlọ na nke mba ọzọ site na mbọ ogologo, ọrụ, nnata na itinye ego. Kọmputa asọmpi, na 2016 [More ...]
Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na ọnụ ụzọ mgbochi na mgbochi amachiri n'ime oke nke usoro iji lụ ọgụ ụdị coronavirus ọhụrụ nwere ọtụtụ mmetụta mmekọrịta ọha na eze. N'oge a nje virus ahụ bụ Gọọmentị [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu: Ire tiketi maka ụgbọ oloko na-efe efe dị elu ga-amalite n'ụbọchị nke abụọ nke Ramadan. Agbanyeghị, tiketi ụgbọ oloko dị n'ụzọ dị ukwuu site na ngwa mkpanaaka na weebụsaịtị ma ọ bụ toll na-enweghị kọntaktị. [More ...]
Obodo Ankara na-aga n’ihu na 7/24 ọrụ asphalt na oge a na-ekwupụta ọkwa dịka akụkụ nke ịlụ ọgụ ntiwapụ coronavirus. Ngalaba nke Sayensị Science, nke rụrụ oruru tọn puku abụọ na puku iri atọ na ụma 16 na Mee 19-23. [More ...]
Xperia Hotels bịara ogbo ikpeazụ ị tinye ego na Erciyes. Onye isi obodo Mayor Dr. Memduh Büyükkılıç mara ọkwa na ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ ahụ, nke rurula ebe a na-eleda anya, ga-enwe ike 550. Onye isi obodo Mayor Dr. Mamdouh [More ...]
Kocaeli Obodo ukwu ga-eweta ụgbọ njem maka ụmụ amaala na-atụghị ọrụ ọrụ n'agbata ụbọchị 52 - 07.00, 09.00 - 17.00 nke nwere bọs 19.00. Satọde, Mee 23,25 na 26 [More ...]
Benye Bụrụla TCDD General Management Kemgbe Owuwu? 1923gbọ okporo ụzọ 1960 nke 3.578 wuru n'agbata 3.208-1940 bụ ndị a rụchara rue 22. N'oge a, ejikọrọ ụlọ ọrụ ahụ na oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka andgbọ njem na [More ...]
Ali İhsan Uygun, onye amuru na Ordu n’April 12, 1966, gụsịrị akwụkwọ na Ngalaba Nka na ụzụ na Ntanetịị nke Igwe na Igwe Eletrọnik na 1987. Na 1988, Ngalaba Nkụzi nke Mahadum Istanbul mara ọkwa nchịkwa azụmahịa [More ...]
Sistemụ Nkesa Na-ebute Submarine nke isii (DBDS) nke HAVELSAN mepụtara n'etiti ụdị New Sub Subineine Project (YTDP) si na usoro mmepụta ma banye n'ahịrị ule. N'agbata ụlọ ọrụ German TKMS na Director Defense Directorate (SSB) [More ...]
A bịa na ọrụ ụgbọ njem ọfịs, anyị nwere ike ikwu na otu ụlọ ọrụ na-ebugharị ebugharị a gbanwere nke a site na ịnye ọrụ a. Ihe a ma ama nke emerela site n’inwe ike nke ndi na ebughari ulo site na ulo rue ugbua ulo oru. [More ...]
Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli, ụlọ ọrụ azụmahịa kachasị na Turkey na Sanliurfa Ceylanpınar State Farm 60 hectare mmiri, nke ga-eweta ego, emeghewo taa. Onye Minista Pakdemirli [More ...]
Onye isi ala nke Onye isi nchekwa nke Onye isi ala. Dr. Ismail Demir, STM Defense Technologies Engineering na Trade AŞ na-eche tankịkọnụ nke nzukọ STM Think Tech haziri, "Kovid-19 na Turkey na Usoro na N'azụ [More ...]
Tourtù Ndị Njem Tourwa (UNWTO) nke United Nations bipụtara barometer May 2019, nke gụnyere data 2020. Gini na mba Turkey gakwara mba nke isii nleta kachasị na ụwa na ụnyaahụ njem nleta [More ...]
Onye ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Emerald Selcuk, oge Covidien iji nwee ike ịkwado ụmụ amaala nọ na mkpa ka ebido n'okpuru onye isi Prime Minister Recep Tayyip Erdogan na March 19, "Anyị ezuru anyị Turkey" [More ...]
Ọ na-aga n'ihu na-egbo mkpa nke ụmụ amaala nwere nkwarụ site na Ministry of Family, Work and Social Services, Institution Security na İŞKUR. Site na oru ndi uloru mere ka umuaka ndi nwere nkwarụ ghara ijigide ndụ ha. [More ...]
Başkentray na Marmaray Ọ Bụ n'efu?
Themụ amaala nke Baskentray na Marmaray na-akwụghị ụgwọ mgbe ọbịbịa ezumike ahụ? ọ malitere ime nchọpụta. N’oge Ramadan, ụgbọ elu Baskentray na Marmaray ga-enwere n'efu. Site na 23:2020 na Satọde, 00.00 Mee XNUMX (Fraide) [More ...]
Turkey Of Foreign Direct Investment Strategy Strategic na-akwadebe
Minista Mmezi na Nkà na ụzụ, Mustafa Varank, Onye isi ala ahụ kwupụtara na ha ga-esoro atụmatụ atụmatụ azụmahịa azụmaahịa Turkey nke Foreign Direct Investment Investment Investment azụmaahịa nke emechara. Varank kwuru, "Anyị chọrọ ịga n'ihu ngwa ngwa na nsonaazụ na nsonaazụ atụmatụ dabeere." ngosipụta [More ...]
A na-ejikọ akwa àkwà mmiri na mbata? Ndi akwa na n'okporo ụzọ awara awara n’efu na ezumike? ọ malitere ime nchọpụta. Na Ramadan, okporo ụzọ na àkwà mmiri ga-enwere n'efu. Maka ntụgharị ruo Wenezde, Mee, elekere asaa nke ọnwa asaa [More ...]
N’agbanyeghi na enwere usoro iwu n’obodo a n’oge Eid al-Fitr, a ga-emechi nlezianya anya n’okporo ụzọ. N’oge Ramadan, ndị ọrụ uwe ojii na Gendarmerie nwere puku mmadụ ruru puku iri na asatọ, ga-arụ ọrụ kwa ụbọchị, ebe ndị uwe ojii na [More ...]
Kedu mgbe a ga-emeghe ụlọ alakụba? Olee mgbe ofufe ga-amalite na alakụba na Masjids?
Na okirikiri nke Ministri nke ime obodo zigara ndị gọvanọ 81, ụdị coronavirus ọhụrụ (Covid- 19) n'ime mgbasa nke ihe ndị Directorate of Affairs Affairs mere iji gbochie mgbasa na Turkey; Site na Machị 16 ruo 2020 [More ...]
Oge mmachi nke ụbọchị anọ nke İnegöl, ọrụ mmegharị na-aga n'ihu na Çardak Mosịlas Mosis, nke arụchara ọrụ ịba ọcha n'anya nke emechara 4/7. Na mpaghara ebe a na-etinye sistemụ akara ngosi smart [More ...]
N'ihi ntiwapụ nke coronavirus, iwu nke elekere sitere na İZBAN gbasara mmachi mgbochi a ga-etinye na 23, 24, 25 na 26 Mee. N'ebe a, oge ọrụ nke İZBAN ga-abụ ndị a:
Ọnye na-bụ Kamuran Yazıcı?
Kamuran Yazıcı, amuru na Trabzon na 1967, guru akwukwo na Karadeniz Technical University, Ngalaba injinia na ulo, Ngalaba Civil Engineering na 1988. O dechara akara ugo mmụta Master ya na Institute of Science na 1991 na otu mahadum ahụ. Nnaukwu [More ...]
Emeela ụbọchị 4 mgbochi 'Turkey Peace Trust'
Ministri nke ime obodo General Directorate of Security, Gendarmerie General Command na Coast Guard nkeji si n'ofe mba ahụ n'otu oge ụnyaahụ site na elekere 08.00-24.00 "Ememe ntụkwasị obi Turkey". Na omume, Eid al-Fitr [More ...]
İsa Apaydın Ònye bụ?
Injinia Metallurgical, onye isi obodo, TCDD General Manager. Amuru ya na Ankara na 1965. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Ngalaba Istanbul Technical University Metallurgical Engineering Department na 1987. O dechara akara nna ya ukwu na Sakarya University Metallurgical Engineering Department na 1996. [More ...]
Ntuziaka Ozi Maka withmụaka nwere Autism Jikere
2 Ndị na-eyi ọha egwu, 5 nke nọ na ndepụta ndị gbara agba, na-enweghị mgbochi na Ugwu Herekol
New Circle na ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Restaurantslọ oriri na ọ Picụ andụ na Ebe Ndị Pụrụ Iche site n'aka Minista ime ime
Ekpebiela akụkọ mgbe ochie Denizli Aydın Highway Tender
Ekwentị TCDD Konya Gar
Ọnye na-bụ Oruc Aruoba?
Minister Karaismailoğlu: Ndi mmadu anyi sitere na asaa rue rue 7 jiri Internet
Oge obibi bidoro n’oge Maritime
Nnukwu mmezi na ndozi amalite na Fatih Sultan Mehmet Bridge
Emere Protocol na urslọ Ọgwụ Obodo Bursa City
Ọnye na-bụ Hande Kazanova?
E guzobere ụlọ ọrụ injin
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 31 Mee 1976 Arifiye-Sincan okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ na Ayaş Tunnel
Ọkwà maka ọmịiko: Ọrụ nnọchi akpọrọ ihe dị na Line Irmak-Zongoldak
Cahit Özkan, onye otu AK Party Group na Denizli osote, kwuputara na A ga-ewepụta Agen Highn-Denizli Highway Project iji gosipụta ọzọ na June 11. Özkan, onye mere ogbako nke ndi nta akụkọ, banyere okporo ụzọ Aydın-Denizli, [More ...]
IMM Okporo MMzọ okporo ụzọ Istanbul na Ọnọdụ okporo ụzọ ugbu a
Roadzọ okporo ụzọ na okporo ụzọ Istanbul
Izmir Karşıyaka Ọnọdụ okporo ụzọ na nke okporo ụzọ